1 .Izy io dia vita amin'ny firaka aluminium amin'ny hamafin'ny avo.ny ambonin`ny fasika fanapoahana, manana endrika tsara tarehy.
2.Jiro manokana, maharitra ela, mora ampiasaina, mitahiry angovo sy mahomby avo lenta, manangona jiro malefaka (azo ampiasaina amin'ny lozam-pifamoivoizana sy fanadihadiana heloka bevava eo amin'ny sehatra sary, ny marika, dian-tanana, sary sns), flux mamirapiratra, 1200 lumen, fiaramanidina 600m, tohizo ny fotoana fiasana 8hours, raha miasa flux 600 lumen, dia manohy miasa mandritra ny 12 ora.
3. Izy io dia mampiasa pulse fanitsiana teknika azo voafidy;
4.Izy io dia mampiasa bateria fiarovana ny tontolo iainana tsy fitadidiana mahery vaika, fahaiza-manao lehibe, tsy misy loto, fiampangana sy famotsorana tsara dia tsara, ambany ny tahan'ny fandefasana;
5.Miaraka amin'ny fitaovana fiarovana sy fanoherana ny fahadisoam-panantenana ambany, ny switch dia azo mihidy raha tsy mampiasa, aorian'ny fampiasana mahazatra, dia mihidy automatique;
6 .Mora entina, azo entin-tanana, entin-tsoroka sy ny sisa, manana porofo tsara amin'ny rano sy vovoka.
1. Mifanaraka amin'ny fitsipiky ny modelimplication ny fifantenana tsy tapaka, ary ny Ex-mark dia tokony ampiana ao ambadiky ny modelimplication.Ny môdely dia toy izao manaraka izao: kaody ho an'ny modelin'ny vokatra implication + Ex-mark.Ohatra, mila ny jiro mirehitra afo.Araka ny hevitr'izy ireo, ny dikan'ny modely dia BS52+ExdⅡCT6 Gb+20.
teo aloha: Jiro tsato-kazo avo lenta mipoaka
Manaraka: dYD andian-jiro tsy mipoaka (LED) jiro fluorescent
Ny endri-javatra misy ny modely 1. Ny fefy dia novolavolaina tamin'ny alàlan'ny firaka aluminium mahery vaika ho an'ny fotoana iray, izay manana hery avo, fiasa tsara amin'ny fipoahana.Ny ivelany dia nofafazana plastika tamin'ny alàlan'ny fanerena avo lenta taorian'ny fipoahana tifitra tamin'ny hafainganam-pandeha avo.Izy io dia manana adhesion matanjaka amin'ny vovoka plastika ary ny fampisehoana anti-corrosive lehibe.Ny fasteners ivelany dia vita amin'ny vy tsy misy pentina.2. Ny trano jiro dia vita amin'ny vera borosilicate avo miaraka amin'ny fifindran'ny angovo lehibe sy ny fanoherana ny fahatafintohinana angovo.It&#...
FCF98(T, L) andian-dahatsoratra Safo-drano tsy misy fipoahana (cast,...
Modely Implication Features 1. Ny akorandriaka dia vita amin'ny firaka aluminium avo lenta izay misy latsaky ny 7.5% magnesium sy titane, izay manana fanoherana tsara ary mahatohitra ny fiantraikan'ny tsy latsaky ny 7J.2. Stainless vy miharihary fasteners amin'ny avo harafesiny fanoherana.3. Fitaovana miaraka amin'ny loharanom-pahazavana LED marika iraisam-pirenena, hazavana tokana, hazavana malefaka, fiainana maharitra, fiarovana ny tontolo iainana maitso, lens LED, teknolojia fizarana hazavana faharoa, fizarana taratra mitombina, fanamiana ...
Modely Implication Features 1. Cast aluminium firaka akorandriaka, maty-fanariana, ambonin'ny sprayed, tsara tarehy tarehy na welded amin'ny Stainless vy, poloney ambonin'ny;2. Sodina vy na tariby tariby;3. Ny compensator dia azo ampiasaina araka izay ilaina.Fitsipika ara-teknika lehibe Fanamarihana 1. Mifanaraka amin'ny fitsipiky ny modelimplication ny fifantenana tsy tapaka, ary ny Ex-mark dia tokony ampiana ao ambadiky ny modelimplication.Ny môdely dia toy izao manaraka izao: kaody ho an'ny fampidirana modely amin'ny vokatra + marika Ex. Ohatra, w...
BAD63-A andian-tsarimihetsika fipoahana-porofo avo lenta ...
Modely Implication Features 1. Aluminum firaka maty-fanariana akorandriaka, ny ambonin'ny electrostatically sprayed, ary ny bika aman'endriny tsara tarehy.2. Patented multi-cavity structure, power cavity, light source cavity ary wiring cavity Ny vatana dia mahaleo tena.3. Manangana fitaratra mangarahara borosilicate avo lenta, mangarahara fonony atomization anti-glare famolavolana, dia mahatanty angovo avo fiantraikany, hafanana fusion, ary ny hazavana transmittance hatramin'ny 90%.4. Stainless vy miharihary fasteners amin'ny avo ...
FC-ZFZD-E6W-CBB-J Jiro vonjy maika amin'ny afo / CBB...
Modely Fampiharana Endri-javatra 1. Karazam-baravarankely "Fiaro amin'ny fipoahana feno fasika" na "vovoka tsy mipoaka", miaraka amin'ny haavon'ny entona tsy mipoaka sy ny tontolo manodidina ny vovoka.2. Aluminum maty-fanariana akorandriaka, ny ambonin'ny electrostatic tifitra, tsara tarehy.3. Mampiasa solaitrabe jiro LED avo lenta, miaraka amin'ny fanjifana herinaratra ambany, fiainana maharitra, tombony tsy misy fikojakojana.4. Naorina-in-tsy fikojakojana ny bateria Ni-MH fonosana, ny n...